लोकतन्त्रको उपहास – NepalayaNews.com
९ बैशाख २०७२, बुधबार १५:२५
जाजरकोट कहाँ पर्छ थाहा छ ? तपाईलाई थाहा होला तर नेपाल सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अनि ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई थाहा छैन । नयाँ वर्ष २०७२ लाग्नासाथै मौसमी इन्ल्फुएन्जाले २० जना जाजरकोटीले ज्यान गुमाइसके । त्यसप्रति संसारभरिका नेपालीहरुको सहानुभूति आइसक्यो सोसल मिडियाहरु । हो, त्यसैले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई जाजरकोट दुखिसक्यो । तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शीर्ष नेताहरु त्यसबारे बेखबर झैं गरिरहेका छन् ।
नयाँ वर्ष नेपालीका लागि नयाँ समयमात्रै होइन, अब त लोकतन्त्रको आस्था र व्यवहारलाई खरो बनाउने अवसर पनि हो । किनभने २०६३ पछि हामीले वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस मान्न थालेका छौं । यही बेला नेपालको सुदूर ठाउँ जाजरकोटमा महामारी फैलिँदा पनि सरकारले त्यहाँका बिरामीलाई सेवा दिने डाक्टर पठाउन सकेन । अनि त्यहाँ कसरी पुग्यो खै लोकतन्त्र ? यो त लोकतन्त्रको उपहास होइन र ? जहाँ लोक अर्थात जनताको बिल्लीबाठ भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ कति हुन्छ ? सक्छौ भने औषधी उपचार नामको लोकतन्त्र जाजरकोट पुर्याएर मनाऊ न यसपालिको दिवस ।
उता जागरकोटमा महामारीले बालबालिकासमेतहरुको ज्यान जाँदा नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री ८९ वर्षे सूर्यबहादुर थापाको मृत्युप्रति आँसु झार्न हतारिए । श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्न हतारिए । उनको मृत्यु असामयिक बन्यो नेताहरुका लागि तर, जाजरकोटेहरुको काल अकाल लागेन उनीहरुलाई । कसैको पनि मृत्यु प्रिय हुन सक्दैन । तर थापाभन्दा महत्वपूर्ण को हो भन्ने कुरा यहाँ राख्न खोजिएको हो । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्रीको कुर्ची पाउनासाथ जाने थापालाई अहिलेका नेताले कसरी महान् भन्न सकेका ? अनि हिजो २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदललाई हराउन धाँधली गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापालाई कसरी प्रजातन्त्रवादी महान् नेता भन्न सकेका ? यो त लोकतन्त्रको उपहास होइन र ? सूर्यबहादुर थापाकै शासन ठिक थियो भने किन गर्नुपथ्र्यो त्यो २०६२,६३ को आन्दोलन ? सक्छौ भने चुप लाग । तर विन्ती धनकुटाको छिन्ताङमा एकैघान पारेर १६ जना गाउँलेलाई गोली ठोक्न अह्राउने सूर्यबहादुर थापाको जयगान गरेर नेपाली जनताको उपहास नगर ।
ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाको खोप जनवरीमै लगाएका थिएः पूर्व सल्लाहकार ९ बैशाख २०७२, बुधबार १५:२५
महाभियोगबाट मुक्तिपछि ट्रम्पको पहिलो भाषण, बाइडेनले ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई ‘अमेरिका लास्ट’ बनाएको आरोप ९ बैशाख २०७२, बुधबार १५:२५
अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको ४० लाख डोज खोप मङ्गलबारसम्ममा वितरण गर्ने ९ बैशाख २०७२, बुधबार १५:२५